प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार, कहिले हुन्छ डिस्चार्ज ? (प्रेस विज्ञप्तिसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार, कहिले हुन्छ डिस्चार्ज ? (प्रेस विज्ञप्तिसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ । अब उनलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गर्नेबारे चिकित्सकले छलफल थालेका छन् ।
बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रा.डा. उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लगभग पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् भन्ने ठानेका छौं । डिस्चार्ज कहिले गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं तर टुंगो लगाएका छैनौं ।’
याे पनि पढ्नुस नेपालको कूटनीति प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
उनले अघि भने, ‘रगतको रिपोर्ट नर्मल अवस्थामा आएको छ । छिट्टै स्वास्थ्य लाभ गरेर छिट्टै फर्किने छन् ।
अस्पतालले बिहीबार बिहान १० बजे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीको स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहेको र छिट्टै सामान्य स्थितिमा फर्किने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चार दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए । उनको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सायमी, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाह र छाति रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासको टोली खटिएको छ।
हेर्नुहोस् अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्ति